moi: November 2016
မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ကျောင်းတိုက်ရှိ သံဃာတော်များအား တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)မိသားစုများက ဆွမ်းဆန်တော်၊ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ စာအောင်ဆုထာဝရငွေပဒေသာပင် အလှူငွေများလှူဒါန်း
တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မိသားစုများမှ မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ကျောင်းတိုက်ရှိ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များအား ဆွမ်းဆန်တော်၊ ဆီ၊ လှူဖွယ်ပစ္စည်း များနှင့် စာအောင်ဆုထာဝရငွေပဒေသာပင် အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါကျောင်းတိုက်၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 10:01 PM No comments:
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
စင်ကာပူ နိုဝင်ဘာ ၃၀
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ခရီးစဉ် ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် ယနေ့ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်၌ စင်ကာပူနိုင်ငံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဗီဗီယန် ဘာလာကရစ်ရ်ှနန်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ လင်မ် ဟန့်ခိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ စင်ကာပူ နိုင်ငံမှ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
Posted by moi at 9:23 PM No comments:
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးစတီဖန် အစား အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်စိုးလင်းအား တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန် ပေးအပ်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးစတီဖန်အား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းတို့ကို လွှတ်တော်က သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။
Posted by moi at 9:22 PM No comments:
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေတစ်သက်တာဆု၊ အမျိုးသားစာပေဆုနှင့် စာပေဗိမာန်စာမူဆု ချီးမြှင့်ပွဲ ကျင်းပ
ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာ ၃၀
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသား စာပေ တစ်သက်တာဆု၊ အမျိုးသားစာပေဆုနှင့် စာပေ ဗိမာန်စာမူဆုများ ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ မြို့မကျောင်း လမ်းရှိ အမျိုးသားဇာတ်ရုံ၌ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားပြီး အမျိုးသား စာပေ တစ်သက်တာဆု ရရှိသူများကို ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။
Posted by moi at 8:08 PM No comments:
လွိုင်လင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၉
၂၁၁၁ ခုနှစ်၊ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၊ ညနေ (၆)နာရီက လွိုင်လင်မြို့ ရှိ နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက ဒုတိယ ဥက္ကဌဆရာတော် သီတင်းသုံးရာ သာသနာ့ဝေပုလ္လဓာတ်တော်ကျောင်းတိုက်၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။
နုိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စင်ကာပူ နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာလီရှန်လွန်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံသို့ တရားဝင် ခရီးစဉ်အဖြစ် ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာသွားသည်။
မြန်မာ-ထိုင်းကုန်စည်ပြပွဲနှင့် ကုန်စည် ဈေးရောင်းပွဲတော် ဘားအံ၌ ကျင်းပမည်
ဘားအံ နိုဝင်ဘာ ၃၀
ကရင်ပြည်နယ်၏မြို့တော် ဘားအံမြို့တွင် ငွေစန္ဒာလမင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် Kaokrai Creative Co,Ltd တို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာ - ထိုင်း ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် ကုန်စည်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့ထိ ငါးရက်တိုင်တိုင် နေ့စဉ် နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီအချိန်ထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Golden Paddy Fields, Mount May Yu and Northern Road of Maungtaw (Part 2)
Maungtaw-Kyikanpyin-Kyeinchaung road is the main street in northern Maungtaw district, but its surface could be generously described as “tertiary” — basically coarse stones and rocks. We left Kyeinchaung for Khamaungseik in the far north, so as to be able to present our readers — the public — with actual situations on the ground.
One-stop service provided for licensing of Kalay industrially produced jeeps
One-stop service is provided for those seeking licensing of jeeps produced in the Kalay industrial zone starting from 27 November, according to the Kalay Industrial Zone supervisory committee.
Commander-in-Chief of Defence Services speaks words of encouragement to injured Tatmadawmen
Accompanied by officials, Senior General Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of Defence Services met with the rank-and-file of Tatmadaw and their families receiving medical treatment at the Tatmadaw Hospital in Pyin Oo Lwin yesterday morning, giving cordial talks and speaking words of encouragement.
Posted by moi at 12:10 PM No comments:
Two local residents were seriously injured on Monday afternoon in the explosion ofalandmine that had been planted byaKIA armed group in Shweku township, Kachin State, according to the Office of the Commander-in-Chief of Defense Services.
Posted by moi at 12:08 PM No comments:
World Food Programme to help villagers in Koetankauk & Cheinkhali
The UN’s World Food Programme will support 424 families in the village tracts of Koetankauk and Cheinkhali in Yathetaung township, Rakhine State, according to the State Counsellor Office’s Information Committee.
Posted by moi at 12:07 PM No comments:
Two Policemen From Namphatka Outpost Missing
Two policemen from the Namphatka outpost in Kutkai went missing on Monday as they returned from justice court, according to the Office of the Commander-in-Chief of Defence Services.
Four more M150 bottles found at Yangon Airport
Four energy drink bottles suspected of being hand-made bombs were found yesterday at Terminal 1 of Yangon International Airport. But,asquad of local mine experts did not find any explosive substances or chemicals, according to the State Counsellor’s Office Information Committee.
Posted by moi at 10:38 AM No comments:
အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးနှင့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှု ရှိစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဆွေးနွေး ဟောပြော
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှ အများပြည်သူများ အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေ ရေးနှင့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှုရှိစေရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်သည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ဆွေးနွေး ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်မြို့မဈေး ဓမ္မာရုံ၌ကျင်းပရာ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ကျန်းမာရေးဌာနမှ ဌာနမှူး ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင်နှင့် ဒေါက်တာမျိုးမင်းတို့က ဆွေးနွေးဟောပြောကြရာ မြိ့မဈေးရှိ စားသောက်ဆိုင်များမှ ချက်ပြုတ်သူများနှင့် ဈေးသူဈေးသားများ တက်ရောက်ကြသည်။
Posted by moi at 10:29 AM No comments:
ပုလဲမြို့နယ်တွင် ကျွန်းသစ်အပါအ၀င် တရားမ၀င် သစ် ၂၉ တုံး ပိုင်ရှင်မဲ့သိမ်းဆည်းရမိ
ပုလ၊ဲ နိုဝင်ဘာ ၃၀
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ တရားမ၀င်သစ်များ ခိုးယူခြင်း၊ ခုတ်လှဲခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်းများကို တားဆီး ကာကွယ် ဖမ်းဆီးလျှက်ရှိရာ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်က ကျွန်းသစ်အပါအ၀င် တရားမ၀င်သစ် ၂၉ တုံးကို ပိုင်ရှင်မဲ့ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တတိယအကြိမ် မြန်မာ-ဂျပန် နိုင်ငံတကာသုတေသန စာတမ်းဖတ်ပွဲကို ပုသိမ်တက္ကသိုလ်တွင် ပြုလုပ်မည်
ပုသိမ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တို့၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ပုသိမ်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်း သဘင်ခန်းမတွင် နိုင်ငံတကာသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့မှ (၅) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့စာတမ်းဖတ်ပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နိုင်ငံများရှိ တက္ကသိုလ်များမှ ပါမေါက္ခများ၊ သုတေသနပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်များမှ ပါမေါက္ခများ သုတေသန ပညာရှင် ဆရာ/မများနှင့် အခြားသော နယ်ပယ်အသီးသီးမှ သုတေသနပညာရှင်များက သုတေသနစာတမ်းများကို ဖတ်ကြား ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ စာတမ်းများမှာ ပြည်ပစာတမ်း (၁၃၇) စောင်နှင့် ပြည်တွင်းစာတမ်း (၂၉၄) စောင်၊ စုစုပေါင်း (၄၃၁) စောင် ဖတ်ကြားကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by moi at 4:03 PM No comments:
မအူပင်ခရိုင်စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ဆောင်ရွက်
မအူပင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၉
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ မအူပင်မြို့တွင် ခရိုင်အဆင့် စားသုံးသူရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက် ၉း၃၀ အချိန်က အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်ရှိ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဆောင်ရွက်သည်။
Posted by moi at 3:53 PM No comments:
လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေးသင်တန်း (၂/၂၀၁၆) သင်တန်းဖွင့်လှစ်
မြစ်သား၊ နိူဝင်ဘာ ၂၈
မြစ်သားမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် စာရေးဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်း စွမ်းဆောင် ရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း (၂/၂၀၁၆) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို (၂၈-၁၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက် (၀၉၀၀) နာရီ အချိန်က မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ကျောက်ဖြူ နိုဝင်ဘာ ၂၉
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ကျောက်ဖြူကားလမ်းပေါ်ရှိ ပွိုင့်လမ်းဆုံတွင် နိုင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့၊ နံနက်(၇) နာရီမှ စတင်၍ မော်တော်ယာဉ်အား စစ်ဆေးပညာပေးခြင်း၊ အရက်သောက်စားထားခြင်းရှိ/မရှိ အရက်မူးတိုင်းကရိယာဖြင့် စစ်ဆေးပညာ ပေးခြင်းနှင့် ထိုင်ခုံခါးပါတ်မပါတ်သော ယာဉ်မောင်းများအားစစ် ဆေးခြင်းများအားဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ရန်​ကုန်​မှ​မော်​လမြိုင်​အထိ ဝှီးချဲတွန်းကာ သန်​စွမ်းမှုပြသသည့်​ မသန်​စွမ်းသူများအဖွဲ့ ပေါင်​မြို့နယ်​သို့ရောက်ရှိ
​ပေါင်​ ၊ နိုဝင်ဘာ ၊ ၂၉
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများနေ့ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသည့် အကြိုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ရန်ကုန်မှ မော်လမြိုင်အထိ ၀ှီးချဲတွန်းကာ သန်စွမ်းမှုစွမ်းရည်ပြသကြသည့် မသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့သည်​ မွန်ပြည်နယ်၊ ​ပေါင်​မြို့နယ်​ ဇင်းကျိုက်​မြို့သို့ နိုဝင်ဘာ ၂၉ရက်၊ နံနက်၁၀နာရီက ရောက်ရှိခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Posted by moi at 3:11 PM No comments:
ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း (၂/၂၀၁၆) ဖွင့်လှစ်
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း (၂/၂၀၁၆) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့ (နံနက် (၈) နာရီခွဲတွင် ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) သင်တန်းကျောင်း ပျဉ်းမနားမြို့၌ ကျင်းပသည်။
အဆင့်မြင့်ရော်ဘာပြား ထုတ်လုပ်ခြင်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ်
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သော ရော်ဘာများ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရေရှည် အကျိုးဖြစ်ထွန်းရေးကို ရည်ရွယ်ပြီး အဆင့်မြင့်ရော်ဘာပြားထုတ်လုပ်ခြင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၆) ကို နိုဝင်ဘာ (၂၈)ရက်က မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရုံး၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Posted by moi at 2:29 PM No comments:
အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလေ့ကျင့်ရေး(မွန်းမံ)သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်
ဖရူဆို၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ထီးပေါ်ဆိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီးပေါ်ဆိုကျေးရွာလူငယ်ဓမ္မာရုံ၌ ကျေးရွာအရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လေ့ကျင့်ရေး(မွန်းမံ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နံနက် ၁၀ နာရီက ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
Posted by moi at 2:17 PM No comments:
တရုတ်-အာဆီယံ အပျော်တမ်းကားမောင်းပြိုင်ပွဲ ဘားအံမြို့မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
ဘားအံ နိုဝင်ဘာ ၂၉
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင် Myanmar Tourim Resources Co.Ltd ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး တံတားမှတစ်ဆင့် နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသော တရုတ်နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံ သားများ ပါဝင်သည့် အပျော်တမ်း ကားမောင်းအဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီခွဲအချိန်က တည်းခိုရာ သိရိဘားအံဟိုတယ်ရှေ့၌ အပျော်တမ်းကားမောင်းပြိုင်ပွဲ တာလွတ်ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပ၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားကြကြောင်း သိရသည်။
Schools & banks in Muse reopened
Due to the recent armed attacks in Muse, northern Shan State, schools were temporarily closed. Now that the area has regained some peace and stability, schools and banks have started to reopen.
Golden Paddy Fields, Mount May Yu & Northern Road Of Maungtaw
It was round about6o’clock in the morning. Being the winter season, the atmosphere of the surrounding area was very cool. The grass was wet with dew sprayed for the whole night. Reflected gentle rays of the morning sun were casting pleasant sunshine over the whole environment.
အမျိုးသားလွှတ်တော် တတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် တတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ကို ယနေ့ နံနက်(၁၀)နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ သည်။
ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပ
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယေန့မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်(D)ဆောင်၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 8:21 PM No comments:
မူဆယ်ဒေသနယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာ၍ နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများ နေရပ်အသီးသီးသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာ
မူဆယ် နိုဝင်ဘာ ၂၈
မူဆယ်မြို့ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် ရောက်ရှိနေသည့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် သူများသည် ယခုအခါ နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရရှိလာပြီ ဖြစ်၍ ၎င်းတို့၏ဆန္ဒအလျောက် နေရပ်အသီးသီးသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာနေကြရာ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ကျင်းပ
ယနေ့ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များက လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းကဏ္ဍ ဆိုင်ရာ မေးခွန်း ၇ ခုမေးမြန်းပြီး စိုက်ပျိုးစရိတ်ထုတ် ချေးခြင်းဆိုင်ရာ အဆို ၁ ခု တင်သွင်း သည်။
မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်မှကြီးမှူးကျင်းပသော ဓါတ်ပုံပညာ သင်တန်း (၃/၂၀၁၆) ဖွင့်ပွဲကို မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်ရှိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနရုံး သင်ခန်းခန်းမ၌ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ကကျင်းပ ပြုလုပ်သည်။
Posted by moi at 3:10 PM No comments:
ဂန့်ဂေါတွင် စပ်မျိုးနေကြာကို ဆောင်းသီးနှံအဖြစ် စိုက်ပျိုးထား၊ မိုးစပါးအပြီးတွင်လည်း လယ်သီးထပ်အဖြစ် စိုက်ပျိုးသွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ
ဂန့်ဂေါ နိုဝင်ဘာ ၂၈
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဂန့်ဂေါမြို့နယ်တွင် စပ်မျိုးနေကြာ ရေဆင်း(၁) မျိုးကို ဆောင်းသီးနှံအဖြစ် ၂၉၅ ဧက စိုက်ပျိုးထားကြောင်းနှင့် မိုးစပါးများ ရိတ်သိမ်းပြီးပါကလည်း လယ်သီးထပ်အဖြစ် ဆက်လက်စိုက်ပျိုးသွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by moi at 2:58 PM No comments:
ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမြန်ဆန်စေရေး ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကျောက်ချောခင်းခြင်း ဆောင်ရွက်
တောင်သာ နိုဝင်ဘာ ၂၈
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ တောင်သာမြို့ နယ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ခွင့်ပြုရန် ပုံငွေများဖြင့်မြို့ နယ် အတွင်းကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားရေးနှင့်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး လွယ် ကူချောမွေ့ စေရေးအတွက် မကြီးကုန်း-ညောင်ကုန်း-ပန်းပေါင်းလမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်းများ ကိုတင်ဒါစနစ်ဖြင့်
ဘုတလင် နိုဝင်ဘာ ၂၈
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ် လေးမြေကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ယုန်လှေးကုန်း ကျေးရွာနှင့် သမ္မတောကျေးရွာတို့ကို ဆက်သွယ်ထားသော မြေသားလမ်းအား ဂျင်းမြေခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ကို လုပ်ဆောင် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ် မန်းရွှေစက်တော် မန်းချောင်းအတွင်း သင်ပုတ်ပလ္လင် တစ်ခု တွေ့ရှိ
မင်းဘူး နိုဝင်ဘာ ၂၈
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက် နေ့လည် (၁၂) နာရီ အချိန်က သင်ပုတ်ပလ္လင် တစ်ခုကို မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲ အတွက် သောင်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ရာမှ မြေထိုးစက်များဖြင့် မြေများသယ်ပို့စဉ် မန်းရွှေစက်တော် ရဲကင်းတည့်တည့် သောင်ပြင်အလယ်မှ အမရပူရခေတ် သင်ပုတ်ပလ္လင်တစ်ခု တွေ့ရှိရကြောင်းသိရသည်။
Posted by moi at 11:16 AM No comments:
ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး သင်တန်းဖွင့်
ဂန့်ဂေါ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဂန့်ဂေါမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီက ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ကျင်းပရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဥာဏ်လှိုင်က သင်တန်းဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 10:58 AM No comments:
ဇောတိက စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ ကျင်းပ
ပဲခူး၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇
ပဲခူးမြို့ ပုဏ္ဏားစုရပ်ကွက၊် အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်၌ နိုဝင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့ နံနက် (၉)နာရီ အချိန်တွင် “ပညာပြည့်ဝနှလုံးလှသော နိုင်ငံသားများ ပေါ်ထွက်လာရေး အရှည်မျှော်တွေးကာ မွန်မြတ်သော စိတ်ထားဖြင့်” တည်ဆောက်ခဲ့သော ဇောတိကကျောင်းဆောင်သစ် အဆောက်အဦအား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
Yangon is facing traffic congestions of mammoth proportions. These traffic jams are causing frustrations not only to the motorists and commuters, but also extremely annoying to the bystanders---the edestrians and the residents in the neighbourhoods of busy traffic areas. Along with the traffic congestions came the frequent cases of accidents, incidents of road rage resulting in exchanges of foul languages and sometimes even turned into scuffles.
Maungtaw paddies harvested on time
The paddies in Maungtaw are being harvested in large part because peace has been restored to Maungtaw area, farmers said.
Posted by moi at 10:24 AM No comments:
Humanitarian aid delivered to Maungtaw
The union government, state government and international organisations are delivering humanitarian aid and cash to internally displaced persons who have been forced into relief camps.
Posted by moi at 10:08 AM No comments:
Monetary aid given to residents and staff in Muse township
The recent armed attacks in the Muse area of northern Shan State forced locals and staff members residing in Mongkoe township and Pansang (Kyugok) to take shelter inaneighboring country, which caused some hardship.
KIA, TNLA Armed Group attacks and extorts money from vehicles
Six people from Panwa village of Mangton township and one from Mongpaw village of Muse township were injured Friday in an attack by combined armed forces of the the Kachin Independence Army (KIA) and the Ta’ang National Liberation Army (TNLA), who also reportedly extorted people lorries and trucks traveling between Moegaung and Phakant as well as from merchants in Muse, according to the State Counsellor Office’s Information Committee.
Posted by moi at 10:07 AM No comments:
Muse border trade value reaches almost $3.2 billion
The total trade value of the Muse border trade camp reached nearly US$3.2 billion this year,adecrease of over $140 million compared to the same period last year, according to the Commerce Ministry.
Posted by moi at 10:06 AM No comments:
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအသစ် ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာ ၂၇
မြန်မာ - ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်က နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့သည့် မိသားစုများ အနက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးမှူးရုံးတွင် ယာယီလက်ခံ စောင့်ရှောက် ထားသည့် အိမ်ထောင်စု(၄)စုအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး သွားရောက်တွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 7:15 PM No comments:
မူဆယ် နိုဝင်ဘာ ၂၇
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ မူဆယ်ရိုင်၊ မူဆယ်ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် မုံးကိုးမြို့နယ်နှင့် ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်)မြို့များရှိ ၀န်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူများသည် စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရန်အတွက် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ တစ်ဆင့် မူဆယ်မြို့အတွင်းသို့ ခိုလှုံ့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ စစ်ဘေးတိမ်းရှောင် ပြည်သူများအနက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ၀န်ထမ်းများနှင့် မိသားစုဝင်များအား ထောက်ပံ့ခြင်းကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်း ကျင်းပ သည်။
Posted by moi at 7:10 PM No comments:
၅၂ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌများနှင့် ၃၆ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးများ ဒုတိယနေ့ဆက်လက်ကျင်းပ
နေပြည်တော်- နိုဝင်ဘာ ၂၇
မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပသည့် (၅၂) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိများအစည်းအဝေးနှင့် (၃၆) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌများ၏ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများ (52nd SEACEN Governors’ Conference / High- Level Seminar and 36th Meeting of the SEACEN Board of Governors) ကို ဒုတိယနေ့အဖြစ် ယနြေ့ နံနက် (၉ျ) နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ The Lake Garden Hotel ၌ ဆက်လက်ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 6:39 PM No comments:
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာလီရှန်လုံး၏ ဖိတ်ကြား ချက်အရ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ မကြာမီ ကာလအတွင်း တရားဝင်ခရီး သွားရောက် မည် ဖြစ်သည်။
Posted by moi at 11:34 AM No comments:
မောင်တောမြို့နယ် ဝါးပိတ်ကျေးရွာတစ်ဝိုက်မှ မသင်္ကာသူ သုံးဦး ဖမ်းဆီးရမိ
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် ဝါးပိတ် ကျေးရွာတစ်ဝိုက်တွင် သတင်းအရ နယ်မြေ ရှင်းလင်းစဉ် မသင်္ကာသူသုံးဦး ဖမ်းဆီး ရမိကြောင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင် ခံရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ကော်မတီမှ သတင်းထုတ်ပြန် ထားသည်။
Posted by moi at 10:53 AM No comments:
KIA ၊ TNLA ၊ MNDAA လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၊ ပြည်ထောင်စု ကားလမ်းမကြီး တွင်လည်း မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီး မှုပြုလုပ်
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း ယမန်နေ့က KIA ၊ TNLA ၊ MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုကားလမ်းမကြီးတွင်လည်း မိုင်းဖြင့်ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီး ခံရကြောင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီမှ သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာ - တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနများ ဦးဆောင် ဆွေးနွေးသည့် အဆင့်မြင့် ဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့၏ ပထမအကြ်ိမ် မြန်မာ-တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့ ဦးဆောင်သည့် (၂ + ၂ )အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲ ကို နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းဆွေးနွေး ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်န်ိုင်ငံ ပူးတွဲသတင်း ထုတ်ပြန်ချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
တတိယအကြိမ် မြန်မာ-အီးယူ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်
တတိယအကြိမ် မြန်မာ-အီးယူ လူ့အခွင့်အရေးဆွေးနွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
တတိယအကြိမ် မြန်မာ-အီးယူ လူ့အခွင့်အရေးဆွေးနွေးပွဲပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့ တတိယအကြိမ် လူ့အခွင့်အရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ခြင်း (၂၂-၁၁-၂ဝ၁၆)
၁။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် မြန်မာ-အီးယူ လူ့အခွင့်အရေးဆွေးနွေး ပွဲကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာစတာဗရို့စ် လမ်ဘရစ်နီဒိစ်တို့က ပူးတွဲသဘာပတိများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
၂။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့် တူညီသည့်တန်ဖိုးထားရှိမှုများကိုအခြေခံ၍ လူ့အခွင့်အရေးနယ်ပယ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိုမိုခိုင်မာစေရန် နှစ်ဖက်သန္နိဋ္ဌာန်ရှိမှုကို ထပ်လောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းစွာအာဏာလွှဲပြောင်းမှုနှင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပြီး အများယုံကြည်လက်ခံနိုင်သော ရွေးကောက်ပွဲများနောက်ပိုင်း ဒီမိုကရေစီနှင့် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့် များတိုးမြှင့်ရန် အစိုးရ၏ကနဦးခြေလှမ်းများကို အီးယူမှချီးကျူးခဲ့ပါသည်။ အီးယူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများမှ (၂၂-၆-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် အီးယူပူးတွဲကြေညာချက် "Special Partnership for Democracy, Peace and Prosperity" တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း အီးယူအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများကို တိုးမြှင့်ထောက်ခံရန် အခိုင်အမာဆက်လက်သန္နိဋ္ဌာန်ပြုထားသည်ကို အလေးထားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၃။ ယင်းသို့ နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုများတွင် မြေယာအခွင့်အရေးများ၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများ၊ နှစ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူညီချက်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေ၊ အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိ လူနည်းစု၏အခွင့်အရေးများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာသည်းမခံမှုနှင့် အမုန်းတရားလှုံ့ဆော်မှုများတားဆီးရေး၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ သူများ၊ ဒုက္ခသည်များနှင့် ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများ၏ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူကုန်ကူးမှု၊ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဓိကစာချုပ်များသို့ အတည်ပြုပါဝင်ရေး စသည့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များစွာကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၄။ လူ့အခွင့်အရေး တိုးမြှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေများကို နှစ်ဖက် ပြောကြားခဲ့ကြပြီး အလေ့အထကောင်းများအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်၍ နှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေမည့်ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းများ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။
၅။ အိုင်အယ်လ်အိုစာချုပ်များ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေများ ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံကအသိပေးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော အိုင်အယ်လ်အိုအခြေခံစာချုပ် များသို့ပါဝင်ရန် အီးယူကအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပြီး အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားသုံးပွင့်ဆိုင် ထိတွေ့ဆောင်ရွက် မှုအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏အလုပ်သမားအခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရာတွင် တိုးတက်မှုများရရှိသည်ကို အီးယူက ကြိုဆိုခဲ့ ပါသည်။
၆။ မြေယာအခွင့်အရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍မြေယာအငြင်းပွားမှုများကို နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီ ဖြေရှင်းရန်အရေးကြီးသည်ကို ပြန်ပြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပြီး မြေယာသိမ်းပိုက်မှုများအပါအဝင် မြေယာအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနှင့် ရည်မှန်းချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၇။ မြန်မာနှင့် အီးယူသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်ရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသဘောတူညီချက် (Investment Protection Agreement - IPA)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စရပ်များအပါအဝင် လူသိရှင်ကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေးသည် အရေးကြီးကြောင်း နှစ်ဖက်သဘောတူလက်ခံ ခဲ့ကြပါသည်။
၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၏ လက်ရှိလုံခြုံရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေကို စိုးရိမ်ကြောင်း အီးယူက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး ကနဦးတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် နောက်ဆက်တွဲအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ နှစ်ခုလုံးအပေါ် လွတ်လပ်၍ အများလက်ခံနိုင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ရန်နှင့် အကူအညီလိုအပ်သူများထံသို့ လူသားချင်း စာနာမှုအကူအညီများ အလျင်အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရန် ထပ်လောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ မြန်မာဘက်က အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုပြောကြားခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲအရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများကို အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများပေးအပ်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါဒေသများသို့ အခြားလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးသူများကို သင့်လျော်သကဲ့သို့ ထပ်မံဝင်ခွင့်ပြုမည့်ကိစ္စ၊ ဖြစ်စဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမည့်ကိစ္စတို့အပေါ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ရေရှည်နိုင်ငံရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် လူမှု-စီးပွားမဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ရရှိရေး ခိုင်မာစွာဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၉။ အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိ လူနည်းစုများ၏အခွင့်အရေးများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အီးယူဘက်မှ ယင်းသို့ ဖြေရှင်းရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ၊မူဝါဒနှင့်အစီအမံများကိုမျှဝေခဲ့ပါသည်။မြန်မာနှင့်အီးယူသည် လူနည်း စုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ဥပဒေပိုင်းမူဘောင်နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရေးမြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြော ကြားခွင့်ရရှိရေး အပြည့်အဝ သန္နိဋ္ဌာန်ရှိသည်ကိုအလေးထားလျက် လူနည်းစုများ၏အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝ ခံစားနိုင်ရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်တို့အတွက် သည်းမခံမှု၊ အမုန်းတရားဖြစ်ပေါ်စေရန်လှုံ့ဆော်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတို့ကိုတိုက်ဖျက်ရေးလိုအပ်ကြောင်း နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
၁ဝ။ ဥရောပသို့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများမှ ရရှိသောသင်ခန်းစာများကို အီးယူကမျှဝေခဲ့ပြီး မူဝါဒပိုင်းဆောင်ရွက်ချက် နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို အီးယူဘက်မှဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၁၁။ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ကူညီထောက်ပံ့မှုများတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး လိုအပ်သည်ကို နှစ်ဖက်အလေးထားပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေး သူငယ်များအခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို အထူးအလေးပေးမှုအပါအဝင် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး ထပ်လောင်းသန္နိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ပါသည်။
၁၂။ နှစ်ဖက်နားလည်မှုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်နှင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစံချိန်စံနှုန်းများ မြှင့်တင်ရေး ဘုံရပ်တည် ချက်များ ခိုင်မာစေရေးအပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှ ကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံက လက်ခံထားသော UPR အကြံပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး အမျိုးသားစီမံ ကိန်းတစ်ရပ်ရေးဆွဲရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ယင်းကိစ္စအပေါ် အီးယူကထောက်ခံ၍ ¤င်း၏အတွေ့အကြုံများ မျှဝေရန်အသင့်ရှိမှုကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာ မင်းကြီးရုံး(OHCHR) နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဝင်ရောက်ရန်ကျန်ရှိသော အဓိကနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေး စာချုပ်များသို့ ဝင်ရောက်ရေးကိစ္စများကို နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၁၃။ စတုတ္ထအကြိမ် မြန်မာ-အီးယူလူ့အခွင့်အရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဘရပ်ဆဲလ်မြို့၌ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ရန်နှစ်ဖက် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
၁၄။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးထွန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ရိုလန်ကိုဘီယာ၊ မြန်မာ နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန (၁၁)ခုမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ ဥရောပသမဂ္ဂမှအရာရှိများ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှ အကြီးတန်းသံတမန်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၁၅။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ ရန်ကုန်မြို့တွင် (၂၁-၁၁-၂ဝ၁၆) ရက်နေ့၌ လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖိုရမ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းဖိုရမ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးနယ်ပယ်၌ မြန်မာနှင့်အီးယူတို့၏ အောင်မြင်မှုများနှင့် ကျန်ရှိနေသောစိန်ခေါ်မှုများ အပေါ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်သူများနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Posted by moi at 8:14 AM No comments: